China ezimise ifanele Abenzi bile kunye Suppliers | Hong Sheng
Iipropati Mechanical I-PP bile iye crystallinity ophezulu kunye nesakhiwo rhoqo, kwaye wenjenje iipropati kakhulu ngoomatshini. Noko ke, bushushu kunye kubushushu obuphantsi, amandla impembelelo ulihlwempu ngenxa iqondo eliphezulu ezinto isakhiwo njalo. Indlela eziqhuba ebalaseleyo ngakumbi umbhobho PP na ukumelana ayeguqa ukudinwa, ngokuqhelekileyo eyaziwa ngokuba le ngcina oluphindwe-ezilikhulu. komsebenzi thermal I-PP umoya bile enokumelana elungileyo ubushushu, kwaye imveliso nga zicocwe kwaye th ...
I-PP bile iye crystallinity ophezulu kunye nesakhiwo rhoqo, kwaye wenjenje iipropati kakhulu ngoomatshini. Noko ke, bushushu kunye kubushushu obuphantsi, amandla impembelelo ulihlwempu ngenxa iqondo eliphezulu ezinto isakhiwo njalo. Indlela eziqhuba ebalaseleyo ngakumbi umbhobho PP na ukumelana ayeguqa ukudinwa, ngokuqhelekileyo eyaziwa ngokuba le ngcina oluphindwe-ezilikhulu.
I-PP umoya bile enokumelana elungileyo ubushushu, kwaye imveliso nga zicocwe kwaye inzala obushushu ka-100 ° C okanye ngaphezulu, kwaye akukho gqitha ku 150 ° C phantsi imeko akukho amandla lwangaphandle. Iqondo lobushushu embrittlement yi 35 ° C, embrittlement kwenzeka ngaphantsi 35 ° C, yaye ukumelana yengqele mgangathweni njengoko polyethylene.
Le uzinzo eekhemikhali duct PP kuhle kakhulu. Ngaphandle zihlaselwa sulphuric acid kanzulu ngokwendawo nitric acid, oko uzinzile amanye wezenzi ezahlukeneyo imichiza. Nangona kunjalo, ubunzima molekyuli hydrocarbon ephantsi aliphatic, hydrocarbon ibhedolaki hydrocarbon ikhlorini nga kubongoza umbhobho PP. Kwaye ukudumba, kunye nozinzo yayo ngemichiza kunye nokwanda crystallinity nangakumbi, ngoko PP inqawe ikufanele ukuvelisa kwemibhobho ezahlukeneyo imichiza nokulinganiswa, isiphumo anti-umhlwa ilungile.
I-PP bile uye phezulu-frequency yokusebenza egqwesileyo yokugquma, yaye ekubeni ngenkankulu afunxa amanzi, ukusebenza yokwambathisa alichatshazelwa ukufuma. It has a rhoqo aphezulu Heating kwaye zingasetyenziswa ukwenza iimveliso yokugquma zombane liyavutha ubushushu. Kwakhona unalo ombane aphezulu kwesimilo ilungele ukusetyenziswa njengoko ngesixhobo sombane. It enokumelana ezilungileyo ombane kunye nokumelana arc, kodwa umbane ophezulu engatshintshiyo kwaye kulula yobudala ngobhedu.
I-PP bile uvakalelo ekukhanyeni yelanga, kunye nokongeza zinc oxide, dilauryl thiodipropionate, icarbon emnyama okanye efanayo lokufaka ezimhlophe unako ukuphucula ukuxhathisa yayo abakhulileyo.
Previous: bar PP
Next: PP ziphatha
YePPM Flame nekudodobalisa Tube Inkampani
YePPM Material Flame nekudodobalisa Tube
YePPM flame nekudodobalisa yobisi
Ukufuma izifunxi , Self-Priming Pump , China Plastic Vertical Pum Factory, Welding yimisi ocwenga ,